फिचर समाचार | Naya Yougbodh National Daily | Page 506 Free songs
Home / फिचर समाचार (page 506)
œ::» फिचर समाचार
‘चर्पी प्रयोग गर्न पानी चाहियो हामीलाई’
December 17, 2013	0 204 Views
गोविन्द खड्का हा“सीपुर (दाङ), १ पुस । जिल्लाको २३ औं खुल्ला दिसामुक्त गाविस घोषणा गर्न सोमवार हा“सीपुर गाविसका बासिन्दाले ‘चर्पी प्रयोग गर्न पानी चाहियो हामीलाई’ भन्ने नारा लगाउ“दै जुलुस निकालेर सभा गरेका छन् । अबेरसम्म कुनै चहलपहल नदेखिए पनि विद्यार्थीसहितको जुलुसले २ ...
जिल्ला शिक्षा समिति गठनमा राजनीतिक चलखेल
December 16, 2013	0 262 Views
चक्र केसी प्युठान, ३० मंसिर । नया“ शैक्षिक सत्र शुरु भएको आठ महिना बितिसक्दासमेत प्युठानमा जिल्ला शिक्षा समिति गठन हुनसकेको छैन । जिल्ला शिक्षा समिति प्युठान लामो समयदेखि गठन हुन नसक्दा प्युठानको शैक्षिक क्षेत्र तथा जिल्लाको शैक्षिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । ...
सर्वोच्चद्वारा भगतसिंह पक्राउको कारण माग
December 15, 2013	0 251 Views
युगबोध समाचारदाता बा“के, २९ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति पार्टीका सर्वोच्च कमाण्डर भगत सिंहलाई पक्राउ गर्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र हाजिरी हुन गृहमन्त्रालयलाई आदेश गरेको छ । न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको इजलासले शुक्रवार ‘वार्ता प्रक्रियामा रहेका बेला उस“ग भएका कुरा के–के ...
दाङमा मासुको मूल्य आकाशियो
December 12, 2013	0 270 Views
निमुसंगम घर्ती घोराही, २६ मंसिर । दाङमा कुखुराको अभावस“गै अहिलेसम्मकै उच्च मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । केही महिना अगाडि काठमाडौंमा बर्डफ्लूको संक्रमणले सबै कुखुराहरु नष्ट गरेपछि त्यसको पूर्ति गर्न दाङबाट कुखुरा निर्यात हु“दा दाङमा कुखुराको अभावस“गै मूल्य वृद्धि भएको हो । अहिलेसम्मकै उच्च ...
खाद्य अभाव टार्न ‘धर्मभकारी’ अभियान
December 11, 2013	0 257 Views
युगबोध समाचरादाता रुकुम, २५ मंसिर । खाद्य अभावलाई न्यूनीकरण गर्न जिल्लाका केही गाविसका गाउ“हरुमा ‘धर्मभकारी’ अभियान शुरु गरिएको छ । कृषकले उत्पादन गरेको अन्न सञ्चित गरी जिल्लामा पूर्णरुपमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन रुकुममा धर्मभकारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सरोकारवालाहरुले यस्तो अभियान शुरु ...
बनकस डोरी बनाउदै मुसोटका महिलाहरु
December 10, 2013	0 288 Views
दशरथ घिमिरे देउखुरी, २४ मंसिर । लक्ष्मीपुर–१ मसोटखोलाकी मीना बुढाको हिजोआज दैनिकी फेरिएको छ । घर ब्यवहारमा सधैं ब्यस्त रहने मीना अहिले भने गाउ“ घरमै पाइने बावियो (वनकस) को डोरी बनाउने पेशामा लाग्नुभएको छ । जसले गर्दा उहा“को दैनिकीमा परिवर्तन ल्याएको हो । ‘समूहमा ...
अझ कायमै छ बालीघरे प्रथा
December 9, 2013	0 302 Views
चक्र केसी प्युठान २३ मंसिर । वर्षभरि कपडा सिलाएवापत एउटा सूचिकारले कति रुपैया“ पाउला ? तपाइ“को उत्तर हुनेछ कम्तिमा पनि चालीस पचास हजार तर प्युठान खुङ–६ का भीम परियारले कपडा सिलाएवापत केही अन्न र सागपात ज्यालाको रुपमा लिने गर्नुहुन्छ । वर्षभरि कपडा ...
December 8, 2013	0 393 Views
यगबोध समाचारदाता घोरँही, २२ मंसिर । फेसबुक सोसल मिडियामध्येको एउटा सशक्त माध्यम हो । हिजोआज कसले के खायोदेखि को कहा“ जा“दैछ वा पुगिसक्यो भन्ने जानकारी लिन पनि फेसबुक हेरे पुग्छ । दिन दुईगुणा रात चौगुणा फेसबुकको प्रयोग र दुरुपयोग भइरहेका बेला दङाली मोडल ...
पुस ६ र माघ ११ गते पोलियो खोप अभियान सञ्चालन हुने
December 6, 2013	0 555 Views
युगबोध समाचारदाता घोराही, २० मंसिर । राष्ट्रिय खोप अभियानअन्तर्गत आगामी पुस ६ गते र माघ ११ गते दाङमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम तयार गरिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङले बिहीवार सरोकारवालाहरुबीच राखेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा त्यस्तो जानकारी दिइएको हो । ...
सभासद्का लागि दौडधुप
December 5, 2013	0 542 Views
कुमार श्रेष्ठ बॉके, १९ मंसिर । संविधानसभा सदस्यका लागि समानुपातिकमा नाम परेका नेताहरुको दौडधुप बढेको छ । उनीहरु ‘गर या मर’ को स्थितिमा शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । समानुपातिकमा नाम परेकामात्रै होइन आ–आफ्ना पक्षको लबिङ गर्न अरु नेताहरु पनि काठमाडौं पुगेका छन् । ‘पहु“च’ भएकाहरु ...
Page 506 of 511« First...480490500«504505506507508»510...Last »